musha More Formula One Drivers Bio Lance Stroll Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Lance Stroll Biography inoratidza chokwadi nezve yake Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Claire-Anne Callens naLawrence Stroll), Musikana (Sara Pagliaroli).
Moreso, Hanzvadzi yaLance Stroll (Chloe), Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro, Masimbisiro uye mambure akakosha.
Muchidimbu, chinyorwa ichi chinokushandira iwe maonero akafara eHupenyu nhoroondo yeLance Stroll.
Iye mutyairi wemujaho anokwikwidza pasi pemureza weCanada muFormula One. Chinyorwa chedu chinovamba kubva panguva yokusvika kwake pasi pano. Zvakare, kusvika aenda pasi rose.
Kukurudzira kuda kwako bio yedu, heino mifananidzo yaLance Stroll. Chokwadi, pfuti yacho inopfupikisa Nyaya yake Yehudiki uye Biography chokwadi kubva pakuzvarwa kwake kusvika mukurumbira wake.
Lance Stroll Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paucheche hwake kusvika mukurumbira wake.
Lance Stroll ndiye mutyairi mudiki kupedzisa mujaho weF1 mumwaka wake werookie. Zvisinei nerukudzo, vashoma vakangoverenga chidimbu chebiography yake uye nyaya yehudiki.
Naizvozvo, zorora paunenge uine kuverenga kunonakidza kweLance Stroll Childhood Nhau Plus yake Untold Biography Chokwadi. Pasina kumwe kunonotsa, ngatipfuurirei.
Lance Stroll Childhood Nyaya:
Kutanga, Lance Strulovitch akaberekwa musi we 29th waOctober 1998. Akasvika pasi pano musi weChina kuna Claire-Anne Callens uye baba vake, Lawrence Stroll.
Lance Stroll akaberekerwa muguta rine vanhu vakawanda mudunhu reCanada reQuebec, rinozivikanwa seMontreal.
Mutambi akauya munyika ari pakati pehanzvadzi yake, Chloe Stroll uye kubva kumubatanidzwa wevabereki vavo (Claire-Anne Callens naLawrence Stroll), ane mufananidzo watakaratidza pano.
Tarisai Lance Stroll Vabereki - amai, Claire-Anne Callens uye baba, Lawrence Stroll.
Lance Stroll akakurira nevabereki vake nehanzvadzi yake kumusha kwavo, Quebec. Kuda kwake mujaho kwakatanga nababa vake, Lawrence Stroll.
Nekukurumidza, chido chemujaho chakatanga kubata Lance Stroll. Aiita zvekumhanya achiri mudiki. Saizvozvo, akatanga karting kare kare.
Lance Stroll aive 5 apo baba vake vakamuwanira Go-kart. Lawrence Stroll akabva atenga Go-Kart yeMwanakomana wake pakuona kufarira kutyaira semutambo. Ndipo pakazvarwa hope dzekukwikwidza muFormula One.
Mufananidzo wepamberi wehudiki waLance Stroll.
Sababa vake, Stroll aive mutsigiri mukuru weFerrari uye aive mutsigiri mukuru waMichael Schumacher (baba vaMick Schumacher). Mudiki Lance, kana abva munzira yekart, aiona mijaho nababa vake.
Pamusoro pezvo, havapotsa kuenda kuCanadian Grand Prix pamwechete paMontreal's Île Notre-Dame. Lance stroll akawana rakabudirira Karting Basa mhuri isati yatamira kuGeneva, Switzerland, muna 2010.
Mudiki Stroll akawana rakabudirira Karting Basa, semwana.
Lance Stroll Mhuri Background:
Stroll ndiye mwana weCanadian billionaire business executive Lawrence Stroll.
Baba vaLance zvakare varidzi vechikamu cheAston Martin Formula One timu. Mukuwedzera, iye mwanakomana waamai vake, muBelgian fashion designer Claire-Anne Callens.
Lance Stroll ndewemhuri yakapfuma. Vaikwanisa kuwana uye kurarama upenyu hwoumbozha. Maererano ne Forbes, baba vaLance Stroll, Lawrence, vane mambure anokosha US$3.1 bhiriyoni kubva munaNovember 2021.
Lance Stroll Mhuri Kwakabva:
Mukuda kuona mabviro emhuri yaLance Stroll, takaona kuti ndewerudzi rwechiRussian Jewish.
Mumwe wemadzitateguru ake aive chikamu chemaJuda akatamira kuRussia. Huwandu hwavo huri pakati pehukuru muEurope.
Pamusoro pezvo, kunyangwe kumusha kwake kuMontreal, kuQuebec, Lance Stroll ane chizvarwa chechipiri kubva kuBelgium.
Kunze kwezvo, amai vake, Claire-Anne Callens, ndiBelgian. Saizvozvo, Stroll mijaho pasi pemureza weCanada uye inobata zvese zviri zviviri Canadian neBelgian vagari.
Kungofanana nevanhu vazhinji muMontreal, Lance Stroll akakurira Bilingual. Anotaura mitauro yose yechiFrench nechiRungu. Saizvozvo, zita remhuri yake, Strulovitch, ine dudziro yechiJudha seSimba, Hunhu Hukuru, Stimulator.
Mukupedzisa midzi yemhuri yaLance, tinofungidzira kuti anobva kuMontreal, Canada uye mugari weBelgian.
Uyezve, ndewerudzi rwevachena. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yaLance Stroll.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaLance Stroll.
Dzidzo yeLance Stroll:
The Montrealer Chap akaenda kuChikoro. Lance Stroll akapinda chimwe chezvikoro zvakanakisa muMontreal padzidzo yake yepuraimari. Kuva nababa vakapfuma kunomupa zvakanakisa mikana yakadaro.
Zvakadaro, mushure mekuziviswa kuKarting pa9, Stroll akatanga kumhanya muNorth America yese neEurope, achitonga, kazhinji achipesana nevana vakuru. Sezvo zvakadaro, pakanga pasina nguva yakakwana yemhando yeChikoro chechikoro.
Uyezve, kurayira kwake mashoko uye kududzira kwairatidza kuti munhu akanyatsodzidza. Pa11, Stroll akasaina kuti apinde paFerrari Driving Academy ichangoburwa muItaly. Aive mudiki munhu kupinda muchikwata cheF1.
Pa11, Stroll akasaina kuti apinde paFerrari Driving Academy ichangoburwa muItaly.
Ferrari yakashandisa Chikoro kudzidzisa vatyairi vanomhanya, magadzirirwo azvinoita mota dzinomhanyisa. Paaive kuAcademy, vakamudzidzisa kutaura nemainjiniya.
Uyezve, maitiro ekuongorora mashandiro emotokari. Uyezve, maitiro ekuita nevezvenhau uye vatsigiri.
Iyo Driving Academy yaive nemakirasi emujaho zano, kusimba uye kudya kunovaka muviri. Moreso, zvidzidzo zvekuwana zvirongwa zvekombuta zvinovandudza mafungiro uye maonero ekuona uye kutevedzera mijaho.
Lance Stroll Early Career:
Mujaho wechidiki airatidza chiitiko chinoshamisa chekarting. Kuita kwaStroll muMicro Max uye Mini Max zvikamu zvaivimbisa.
Muna 2008, akabuda mubairo weGore neFédération de Sport Automobile du Québec.
Kunze kwekuhwina mukwikwidzi weCanada Karting, gore rakatevera, Lance Stroll akahwina Mutyairi weGore. Zvakadaro, akapedza makwikwi ari pachinhanho chechipiri.
Zvekare muna 2010, akatorazve zita remukwikwidzi weCanada Karting uye akahwina ane mukurumbira Florida Winter Tour. Mushure mezvo, akabva atarisira kumakwikwi ake ekutanga.
Muna 2008, akabuda, Rookie weGore mubairo neFédération de Sport Automobile du Québec.
Lance Stroll Biography - Mugwagwa weMukurumbira:
Mujaho wemota waStroll wekutanga wakaitika mu2014 Florida Winter Series. Akamhanya achipesana nevakwikwidzi veF1 Nicholas latifi uye Max Verstappen. Lance Stroll akatora maviri podium kupera pamwe nenzvimbo yepole paHomestead-Miami Speedway.
Kechipiri, akaita makwikwi ake emujaho wemotokari mumakwikwi e2014 Italian F4 Championship, achityaira Prema Powerteam. Kunyangwe akapotsa kutenderera kwekupedzisira nekuda kwekukuvara, Stroll akabuda senge shasha yakatevedzana.
Pakutanga kwa2015, Stroll akahwina muNew Zealand-based Toyota Racing series. Akatora mijaho minomwe yakahwina, gumi nenhatu apedza, uye zvinhanho zvishanu. Akaita rekodhi yegumi podium. Kuwedzera kuhwina mana kubva kumijaho gumi nematanhatu inotanga.
Lance Stroll akakwikwidza nevakwikwidzi veF1. Akamhanya achipesana naAntonio Giovinazzi, Charles Leclerc, george russell uye Alexander Albon.
Ipapo, akahwina mujaho mumwechete kuHockenheimring, achiwana mijaho mitanhatu yakazara mumakwikwi e33-mujaho. Lance Stroll akapedza mwaka wechishanu mumakwikwi. Iye wekuMontreal akabva asiya Ferrari Driver Academy kuchikwata chaWilliam.
Lance Stroll akahwina mujaho mumwe chete paHockenheimring, achipedza zvitanhatu zvakazara podium.
Lance Stroll Biography - Simuka kune mukurumbira:
Stroll akatyaira timu yeWilliams panguva ye2017 Formula One Mwaka. Akabatana naFelipe Massa. Stroll akave mutyairi wekutanga weCanada Formula One kubvira 1997 World Drivers 'Champion Jacques Villeneuve.
Akahwina mapoinzi ake ekutanga eFormula One kumba kwake Grand Prix kuMontreal, achipedza wechipfumbamwe. KuAzerbaijan Grand Prix, Stroll akanga amhanya ari pachinhanho chechipiri mumakwikwi ekupedzisira, Valtteri Bottas akanga ari mberi kwake. Ona zvakanakisa zveAzerbaijan Grand Prix pano.
Saka, akapedza wechitatu kuti ave mutongi gotwe rokie kupedzisa papodium muFormula One. Uyezve, wechipiri-mudiki mutyairi mushure meMax Verstappen kuti apedze papodium muFormula One.
Stroll akachinjira kutyaira kuchikwata chichangobva kupihwa zita reRacing Point yemwaka wa2019 mushure mekunge varidzi vechikwata ichi vaita mubatanidzwa wevanoisa mari inotungamirwa nababa vake, Lawrence. Akatsiva Esteban Ocon muboka ndokumhanya padivi pake Sergio Perez.
Nekudaro, Stroll akaramba achityaira timu yeRacing Point timu muna 2021, pasi pezita ravo idzva. Akasangana naye Sebastian Vettel pachinzvimbo chaPérez. Moreso, Aston Martin anochengeta Sebastian Vettel naLance Stroll nokuti 2022.
Ndiani Lance Stroll Dating?:
Formula yekutanga mutambo wepamusoro-octane une chirongwa chinoda. Asi, vazhinji vevatyairi vachiri kukwanisa kuwana rudo. Zvakadaro, vamwe vatyairi vanosarudza kuchengetedza hupenyu hwavo hwepamhepo kunze kwenzvimbo. Zvichakadaro, vamwe havambotadzi kutumira mapikicha nevavanoda pasocial media.
Lance Stroll aramba kuregererwa. Ari kufambidzana nemuenzaniso weItaly, Sara Pagliaroli. Akamboonekwa ku2021 Bahrain GP achifadza mudiwa wake kubva padivi. Kunze kwezvo, iyo modhi inozvirumbidza pamusoro pevateveri ve160,000 pa Instagram.
Iyo modhi yakazivisa hukama hwavo mushure mekutumira vhidhiyo yemumvuri wake uye murume asingazivikanwe pamwe pamahombekombe. Uyezve, vakaenda kuruzhinji paZuva raValentine, naSara achitumira akateedzana mafoto erudo naLance Stroll.
Lance Stroll ari kufambidzana nemuItaly modhi, Sara Pagliaroli.
Zvakawanda nezveMusikana waLance Stroll - Sara Pagliaroli:
Mutevedzeri weItaly wakauya pasi pano musi we 18th waFebruary 1995. Lance Stroll ane makore mana ari muduku kwaari. Zvakangodaro, vaviri ava vari kunakidzwa nehukama hune hutano, vachifunga nezvemifananidzo yakajeka yavanoisa pamwechete pasocial media.
Sara Pagliaroli itsime maneja wezvemari wekambani yakavakirwa pamatombo anokosha. Kunze kwezvo, anomhanyisa bhizinesi rake rezvishongo anonzi Blue Lemon Jewels.
Sara Pagliaroli anomhanyisa bhizinesi rake rezvishongo rinonzi Blue Lemon Jewels.
Lance Stroll Hupenyu hweMhuri:
Panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yeimba yaLance Strulovitch. Zvirokwazvo, Lance haaigona kuzviita kusvika parizvino pasina tsigiro yakasimba yeimba yake. Chisungo mukati memba chakabatsira kuumba murume Stroll ave nhasi.
Mufananidzo wakanaka weThe Strolls.
Zvimwe NezvaLance Stroll Baba - Lawrence Sheldon Strulovitch:
Baba vaLance Stroll ndiLawrence Sheldon Strulovitch. Asi anonyanya kuzivikanwa saLawrence Stroll. Akaberekerwa kumhuri yechiJudha muMontreal, Quebec. Saka, akaita rombo rakanaka kutevera baba vake muindasitiri yemafashoni. Mambure ake anosvika mumabhiriyoni emadhora.
Ipapo, hupfumi hwake hwakamubvumira kutevera rudo rwake rwemitambo yemotokari. Chaive chishuwo chake chemitambo yemijaho chakabva paLance. Akakura akanyura mutsika yemotokari yemujaho nekuda kwaLawrence.
Kwaiva kuda kwaLawrence mitambo yemijaho ndiko kwakabva paMwanakomana wake, Lance.
Muzvinabhizimisi wefashoni Lawrence Stroll akapedza mamiriyoni achibatsira mwanakomana wake, Lance, kufambira mberi mumujaho. Apo Lance akanga asiri panzvimbo yekart, iye naLawrence vaiona mijaho paTV. Ivo havambokundikane kuenda kuCanada Grand Prix pamwechete.
Lawrence ndiye muridzi weCanadian racecar circuit Circuit Mont-Tremblant muQuebec's Laurentian Mountains. Aive nehunyanzvi hunoshamisa hwekutsigira vanohwina. Saka, akatanga kuwana rezinesi Pierre Cardin vana kupfeka muCanada.
Uyezve, akatanga Polo Ralph Lauren muEurope mu'80s. Pane imwe nguva, akadyara mune angave asingazivikanwe zvipfeko mugadziri anonzi Tommy Hilfiger. Akazobuda mumwe wevakuru vezvemari veMichael Kors brand.
Zvimwe pamusoro peJewish Billionaire - Lawrence Sheldon Strulovitch:
Lawrence akaroora Raquel Stroll (née Diniz). Zvakangodaro, aimbove akaroora amai vaLance, muBelgian akaberekwa Claire-Anne Stroll (née Callens). The Strolls vane vana vaviri (Lance naChloe).
Ndiye sachigaro mukuru wechikwata cheAston Martin, icho mwanakomana wake, Lance Stroll, anomhanya. Ane chikamu chegumi nematanhatu muzana muAston Martin muna Kubvumbi 16 kuburikidza nerebrand uye kubatanidzwa kwechikwata chakasiyana cheF2020 chaaive nacho (chaimbozivikanwa seRacing Point).
Mufananidzo wababa vaLance, Lawrence Sheldon Strulovitch - the billionaire fashionprenuer.
Zvimwe Nezve Lance Stroll Amai - Claire-Anne Callens:
Amai vaLance Stroll ndiClaire-Anne Callens. Iye muzvinabhizimisi wechikadzi wekuCanada uye anofarira zvemitambo. Hapana mubvunzo kuti Lance anoda sei amai vake. Kusvika parizvino akanakidzwa nerudo rwake, rutsigiro uye zano mumakore ake ekukura.
Claire-Anne Callens anofarira kutamba gorofu. Muna 2015, akatangawo mutsara wake wekupfeka kwepamusoro-soro muMontreal. Claire-Anne mukuwedzera ane imwe muMont-Tremblant. Heino vhidhiyo inoratidza Claire-Anne Callens uye mutsetse wake wemachira.
Anoratidzira zvipfeko zvechikadzi zvakawanda zvinoenderana nemagadzirirwo uye mamiriro ekunze. Uyezve, Callen anogara kuMilan. Anoshandisa jira reItaly rakapfava uye hunyanzvi. Kunyanguvezvo, anopfuura makore makumi maviri eroorano yake yakava yenguva pfupi. Tichiri kuziva chikonzero.
Mufananidzo waamai vaLance Stroll ndiClaire-Anne Callens.
Zvimwe Nezve Lance Stroll Hanzvadzi - Chloe Stroll:
Sezvambotaurwa kubva pakutanga kweBiography yedu, Lance Stroll anongova nemukoma. Hanzvadzi yake inonzi Chloe Stroll. Lance nehanzvadzi yake huru, Chloe, vanowirirana. Vose vane nhoroondo yakagoverwa. Vakapinda zvikoro zvimwe chetezvo mutaundi rokumusha kwavo, Montreal.
Chloe Stroll muimbi weCanada uye munyori wenziyo. Akazvarwa musi we 13th waApril 1995. Kunyange zvazvo asiri mutambi wemitambo saLance, anomutsigira panguva yemakwikwi ake. Saizvozvo, anonyora uye anonyora rwiyo rwake.
Stroll akamusunungura iye Mumwe, Surrender, muna 2012 mumhanzi mukuru wepasirese wekutepfenyura sevhisi, Spotify. Rwiyo rwune pamusoro pe115k maonero paYouTube.
Mufananidzo waChloe aina Lance Stroll.
Chloe Stroll muhukama here? - Mukomana/Murume:
Hanzvadzi yaLance Stroll haina kuroorwa. Zvakangodaro, Muimbi weCanada Chloe ane mukomana anonzi Scotty James. Chloe naScotty vanga vachifambidzana kubvira 2019.
Scotty James inyanzvi Snow Boarder. Iye muOlympic Bronze menduru zvakare. Scotty James akakunda zvakare World Championships 3 nguva muhupenyu hwake hwose. Ivo vanoyevedza uye vane rudo vadyidzani vanowanzo govana mafoto avo akanaka pasocial media.
Hanzvadzi yaLance Stroll, Chloe nemukomana wake, James.
Zvakawanda Nezve Lance Stroll Relatives:
Mutyairi weCanada-Belgian F1 anofanira kunge aine dzimwe hama. Lance Stroll ane vashoma vemitezo yemhuri kunze kwababa vake, amai uye hanzvadzi yechikuru. Ane vana sekuru, vana sekuru naambuya.
Kunyange zvakadaro, pahama dzake dzose, taigona kuziva chete nasekuru baba vake, Leo Strulovich. Iye muJudha anopinza fashoni kunze kwenyika. Lance mukuwedzera ane amai vokurera, Raquel Stroll (née Diniz).
Lance Stroll Hupenyu hweMunhu:
Kunze kwekumhanya, mujaho wekuCanada-Belgian F1 anofarira Hockey, Gorofu, kuchovha bhasikoro, Snow skating uye Surfing. Iyo Formula one nyeredzi inoita kuti maekisesaizi akoshe. Munguva yehuduku hwake, motorsports yakatanga sechido.
Saka nekudaro, iye, pamwe chete nababa vake, Lawrence, akazviita tsika kuenda kumitambo yemujaho yeMontreal uye kuona vamwe paTV. Kusvika pari zvino, akafarira vateveri vazhinji kwaari.
Kunze kwekumhanya, mujaho wekuCanada-Belgian F1 anofarira Hockey, Gorofu, kuchovha bhasikoro, Snow skating uye Surfing.
Lance Stroll anoshandisa mapuratifomu ake ezvekurapa kuti arambe aine hukama nevateveri vari kukura. Anowanzo taurira mhuri yake, shamwari uye hukama pane yake nguva. Yake Instagram account chete ine vanopfuura 600k vateveri.
Lance Stroll Mararamiro:
Ramangwana rakajeka. Mutyairi weF1 wechidiki kusvika parizvino ave nekutanga kunoshamisa. Hapana mubvunzo kuti akazviwanira mamiriyoni emadhora. Nekudaro, achiri mugari wenhaka kuchigaro cheBillionaire Strolls Dynasty. Saizvozvo, tinotarisira zvakawanda zvinokatyamadza kubudirira.
Panguva ino, Lance anogona kutenga chero chinodiwa nemoyo wake. The Strolls vane dzimba dzakawanda. Imba yavo yekutanga iri muMontreal. Kunze kwezvo, mhuri inochengeta imba imomo muWestmount.
Asi ivo vanewo imba hombe muMont Tremblant, iri padyo neLawrence Strolls 'yakavanzika mujaho wedunhu. Anonzi ane dzimba muLondon neSwitzerland zvakare. Uyezve, Lance Stroll anogara mune imwe yeStroll dzimba muGeneva, Switzerland.
Lance Stroll anogara mune imwe yeStroll dzimba muGeneva, Switzerland.
Lawrence Stroll ine yakakura muunganidzwa wemota, kunyanya Ferraris, kubva kuFerrari 250 GTO, kuenda kuLaFerrari. Lawrence aimbova muridzi weFerrari dealership yeQuebec.
Ane dzimwe mota dzakaita seMcLarens neFord. Waiona mota dzakawanda mugaraji redzimba dzake dzakawanda.
Lance Stroll anonzi anowana $3m pagore. Sekureva kwaCelebrity Net Worth, Lance ane mambure anokosha emadhora makumi mashanu. 50 yakaona Canadian-Belgian Chap ichijoinha matinji echikwata cheRacing Point pamwe chete. Sergio 'Checo' Perez.
Mutyairi anobhadhara, zvakataurwa naLance, zvakangowedzera kubva baba vake bhirioni vakatenga timu kubva kumucheto kwekuparadzwa.
Muna 2017, Canada Life yakapa Lance Stroll rutsigiro mushure mekuwana chigaro cheF1 naWilliams. Akazobatana neJCB, kambani yeBritish, apo aine timu yeBritish.
Stroll inoratidzwa mukushambadzira kweJCB uye zvakare yakashanyira iyo JCB academy, inyanzvi muinjiniya uye bhizinesi qualification. Bombardier Inc. yakabatana naStroll, uyo ave kutamba logo yavo pangowani yake.
Zvakadaro, mugadziri wengowani akaenderera mberi neStroll muF1 mushure mekugadzira ngowani yake muzvikamu zvepasi. Lance Stroll akawanawo rutsigiro rwakakura kubva kuna baba vake, Lawrence, muzvikwata zvese. Mari yababa iyi inoita $3.2billion.
Lance Stroll Untold Chokwadi:
Anonyanya kuzivikanwa nekuwana budiriro yake yemujaho achiri mudiki. Chii chimwe? Pazasi pane zvishoma zvinokatyamadza zvimwe chokwadi nezveMontreal-native F1 racer.
Chokwadi #1: Kurinda Kwake Kweruoko:
Lance Stroll anoda zvinhu zvake uye anongwarira mhando yaanotenga. Anopfeka mawachi akanakisa kubva kuOris. Mazhinji ake anoona logo yake.
Iyo Piece yakawana Carbon fiber. Basa rayo rinonakidza. Varume vashoma vakapfuma ndivo vanotsika nzira iyi. Heino vhidhiyo yekushanya kwaLance Stroll kufekitori yeOris muSwitzerland.
Chokwadi #2: Chitendero cheLance Stroll:
Mutyairi wemujaho weCanada-Belgian F1, semaJuda mazhinji, haasi muKristu. Zvaanotenda ndezvechiJudha. Kutenda ndicho chitendero chekaresa pasi pano chokuti kuna Mwari mumwe chete, chinotangira makore anoda kusvika 4,000 XNUMX.
Vateveri varo vanotenda muna Mwari mumwe akazvizivisa kupfurikidza navaporofita vekare. Nhoroondo yechiJudha inokosha pakunzwisisa zvitendero zvechiJudha, izvo zvine nhaka yakawanda yemutemo, tsika nemagariro.
Zvisinei, musikana waLance Stroll, Sara Pagliaroli, muKristu. Fungidzira kuti harisi dambudziko muhukama hwavo sezvo zvavanotenda zvichiratidzika kunge zvakangofanana.
Chokwadi #3: Nezve Lance Stroll Helmet:
Kubva paakasaina naAston Martin, Lance Stroll akapfeka ngowani huru iyi. Iyo ngowani inodzoreredza dhizaini inobata ziso uye ruzivo kubva kune mavara kusvika kune branding. Inodzokorora zvachose yekutanga pachiyero che1: 2.
Iyo hafu-mwero ngowani, yakasainwa naLance, yakanakira kutsigira iconic yake Aston Martin timu uye mutyairi. Nekudaro, iyo Siginecha chinzvimbo uye inki ruvara inogonawo kusiyana.
Mufananidzo une ngowani yechikero, yakasainwa naLance Stroll.
Lance Stroll Biography pfupiso:
Stroll yanga iri imwe yevatyairi vari kuuya pane grid. Akamboita zvakanaka mumwaka we2020 F1 aine danda remusikana kuTurkey Grand Prix. Mwaka uno, zvisinei, akaodzwa mwoyo nekusatamba zvakanaka.
Waaishanda naye Vettel akapedza ari 2nd kuti atore Aston Martin podium yavo yekutanga yemwaka. Sezvineiwo, kukurumidza kutenderera kuburikidza neLance Stroll Biography uye Childhood Nhau, isu tave neruzivo rwese zvaungada kuziva nezvake.
Networth yake, zera, kureba, uremu, Musikana, vabereki, hanzvadzi, hama, kusimuka mukurumbira, nezvimwe zvinounganidzwa patafura iri pazasi.
Zita rizere: Lance Strulovitch
Zita rekudanwa: Lance Kufamba
Zuva rekuzvarwa: 29th Zuva ra Gumiguru 1998
Age: (23 makore nemwedzi 8)
2021 timu:	 Aston Martin-Mercedes
Nhamba yemotokari: 18
Mapinda: 97 (96 kutanga)
Baba: Lawrence Sheldon Strulovitch
Amai: Claire-Anne Callens
Sisters: Chloe Stroll
Hama: Leo Strulovitch (baba vababa), Raquel Stroll (amai vokurera)
Musikana: Sara Pagliaroli
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Scorpio
Hobbies: Hockey, Gorofu,
kuchovha bhasikoro, Snow skating uye Surfing.
kukwirira:	 5 ft 10 mu (1.82 m)
Weight: 154b (70kg)
Muhoro: $ 3 Million
Net Worth:	 $ 50 Million
Social Media: stroll.lance (facebook), lance_stroll (twitter) uye lance_stroll (instagram).
Sezvatinotenderedza Biography yaLance Stroll uye Nyaya yeHupenyu hweVacheche, ndinofungidzira kuti unogona kutora zvidzidzo zvishoma. Semwanakomana webhirioni fashionpreneur, kuwana zvinhu zvakanaka zvehupenyu kwaisazove kwakaoma.
Kunyangwe Lance Stroll akafunga kusaita chero chinhu nezveramangwana rake, zvinowanzoitika kuti haazotamburi. Zvisinei, Lance Stroll akagamuchira mutoro wake. Akavaka pahupfumi uye pesvedzero yaBaba vake Akapfuma kuti azviitire basa.
Canadian-Belgian F1 mujaho akawana kukosha kwake. Kutsunga kwake uye kushanda nesimba zvakamubatsira. Pasinei nezera rake duku, hazvimutyisidzi kuedza zvinhu zvitsva. Sezvo akadaro, kazhinji haana kuisa zvinyorwa zvemuduku nguva dzose.
Chinocherechedzwa pane zvese kuve mutyairi mudiki kupedzisa mujaho weF1 panguva yemwaka wake werookie. Tinovimba wakaverenga zvinonakidza mukati meBio nyaya yedu. Bhalisa kune zvimwe zvedu Formula one Drivers 'Biography. Iko kurongeka uye yepamusoro-notch mhando ndiyo siginicha yedu.